Shinoa Mpikatroka Zon’ny Vehivavy Mandeha An-tongotra 2 000 Kilometatra Ho Fanoherana Ny Fanararaotana Ara-Pananahana · Global Voices teny Malagasy
Shinoa Mpikatroka Zon'ny Vehivavy Mandeha An-tongotra 2 000 Kilometatra Ho Fanoherana Ny Fanararaotana Ara-Pananahana
Voadika ny 11 Janoary 2014 21:03 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Italiano, Español, Français, Ελληνικά, 繁體中文, 简体中文, English
Mbola zava-baovao ao Shina ny fitsangatsangana irery mandeha an-tongotra. Na dia misy aza ireo vehivavy mankafy ny hevitra tia kisendrasendra, miahiahy manoloana ny herisetra ara-pananahana eny an-dalana izy ireo. Izany indrindra no nahatonga an'ilay Shinoa mpikatroka miaro ny zom-behivavy nanangana ny tetikasany vaovao: Fitsangatsanganan'ny Feminista Manja – Fihetsiketsehana Manohitra Ny Fanararaotana Ara-pananahana fo fampiroboroboana ny Fahalalahan'ny Vehivavy.
Mandeha an-tongotra manavatsava ny lalana miainga ao Beijing ka hatrany an-tanànan'i Guangzhou any amin'ny faritra atsimo – manana halavirana eo amin'ny 2000 km eo i Xiao, mpilalao fototra amin'ny fiteny Shinoa “Vagina Monologues (Teny Irerin'ny Fivaviana)” – mba hanoherana ny herisetra ara-pananahana sy ny fanararaotana ny ankizy. Efa-bolana izay no laniny teny an-dalana ary nahaangona sonia nandritra ny diany, nanao fampisehoana ary nizara vaovao tamin'ireo governemantam-paritra. Nizara ny zava-niainany tao amin'ny bilaoginy miaraka amin'ny sary, soratra ary kisarisary izy.
Xiao Meili, mpikatroka miaro ny zom-behivavy (pikantsary avy amin'i youku)
Teraka tamin'ny taona 1989 tao amin'ny faritanin'i Sichuan ao Shina i Xiao, ary nanatontosa tetikasa marobe miaro ny zon'ny vehivavy mba hampiroboroboana ny miralenta sy ny fahalalahana. Tamin'ny Fetin'ny Mpifankatia tamin'ny 2012, iray tamin'ireo vehivavy telo nitafy ankanjo mariazy mihoso-drà izy ho fanoherana ny herisetra ao an-tokantrano. Efa nibodo ny efitra fivoahan'ny lehilahy ihany koa izy mba hanohitra ny tsy rariny tafahoatra atao amin'ny efitra fivoahan'ny vehivavy ao Shina, ka nitaky ny governemanta mba hanome efitra kely fidiovana maromaro hoan'ny vehivavy (araka ny tatitra tamin'ny gazetiboky Time, mijanona 30 segondra ny lehilahy rehefa mampiasa efitra fivoahana, raha toa ka 90 sekondra kosa hoan'ny vehivavy). Tamin'ny Aogositra 2013, nosolainy ny lohany ho mariky ny fanoherana ny fanavakavahana misy amin'ny fandraisana vehivavy mpianatra eny amin'ny Oniversite.
Fampianarana manao sary sy mivarotra zavatra taloha (vintage) amin'ny alalan'ny fivarotana antserasera Taobao no fiveloman'i Xiao ankehitriny. Mangataka fanomezana ao amin'ny pejiny Taobao izy ho fanohanana ny diany. Mangataka ihany koa izy mba hiara-handeha an-tongotra aminy ireo vehivavy ao amin'ny faritra, na hanome seza lava hoazy hijanonany amin'ny alina.
Jereo ny lahatsary eto ambany raha te-hahita ny fikatrohan'i Xiao:
1 andro izayHong Kong (Shina)
2 andro izayFilipina
4 andro izaySingapaoro